DEG DEG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo goordhaw xarunta madaxtooyadda ka furay shirka Talo Qaran – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo goordhaw xarunta madaxtooyadda ka furay shirka Talo Qaran
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhaw xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka furay shir loogu magac daray Talo Qaran.
Shirka oo haatan si toos ah uga socdo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb-galaya mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona shirkaan uu yahay mid looga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan waxyaabaha ay qaban doonto dowladda cusub ee lasoo dhisi doonno.
Sidoo kale, shirkaasi ayaa lagu soo bandhigi doonnaa talooyinka kala duwan ee laga soo aruuriyay bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibadabba.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in shirkaan loogu magac daray Talo Qaran laga furi doonno magaalada Muqdisho, islamarkaana uu shira noqon doonno mid ay bulshada Soomaaliyeed ku wadaagaan talooyinkooda.
Dhinaca kale, ammaanka goobta uu shirka ka soconaayo ayaa ah mid aad loo adkeeyay, waxaaana saacadaha soo socdo la filayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxaafadda uga warbixiyo waxyaabaha shirkaasi ka qabsoomay.